Ny Redmi Note 7 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana | Androidsis
Xiaomi's Redmi Note 7 tonga ofisialy any Espana
Andro vitsy lasa izay dia nanambara i Xiaomi fa manana hetsika fampisehoana efa nomanina tany Madrid izy ireo tamin'ny 6 martsa. Ny marika sinoa dia tsy nilaza hoe finday iza no ho haseho eo aminy, na dia naneho ny peta-drindrina 7. Noho izany, maro no nihevitra fa ho fampisehoana iraisam-pirenena ny Redmi Note 7, izay natolotra tany Chine tamin'ny Janoary.
Ary farany, ireo fiheverana ireo dia marina, satria ny marika dia nandamina hetsika iray ampidiro amin'ny tsenan'i Espaniola ity Redmi Note 7 ity. Efa fantatsika hoe rahoviana no hanomboka any Espana ity elanelam-potoana vaovao ity, telefaona iray izay manana ny zava-drehetra hahomby amin'ity fizarana ity. Any Sina dia efa fahombiazana izany hatreto.
Mahita kinova telo izahay amin'ity afovoan-tany ity, izay hamidy any Espana avokoa. Na dia samy hafa aza ny daty famoahana ireo andiany tsirairay ao amin'ny Redmi Note 7, ary koa ny vidiny. Saingy efa nizara ity fampahalalana ity tamin'ny mpampiasa ny marika.
Ny voalohany dia ny kinova 3/32 GB izay havoaka amin'ny 14 martsa amin'ny vidiny 149 euro. Etsy ankilany, hitantsika ihany koa ny kinova hafa an'ny Redmi Note 7 miaraka amin'ny 4/64 GB izay hatao ny 21 martsa ho avy izao. amin'ny anao amin'ny vidiny 199 euro.
Raha manana kinova fahatelo amin'ity elanelam-potoana ity izahay, izay ilay tonga miaraka amin'ny 4/128 GB. Raha te hividy an'ity dia mila miandry kely kokoa ianao, satria amin'ny 1 aprily ho avy izao no hanombohana azy io any Espana. Amin'ny anao, manao izany amin'ny vidiny 249 euro, ny lafo indrindra indrindra, araka ny nandrasana.
Noho izany, ireo mpampiasa any Espana dia liana amin'ity Redmi Note 7 ity efa fantatrao hoe rahoviana ianao no afaka manantena an'io antonony eo amin'ny tsena io, ao amin'ireo kinova tsirairay. Azo atao ny mividy azy any amin'ny fivarotana marika, ho fanampin'ny teboka hafa amidy toa an'i Amazon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi's Redmi Note 7 tonga ofisialy any Espana
Nilaza ny CEO CEO Meizu fa fanandramana ara-barotra ny Meizu Zero
Milalaova amin'ny maha-mpitarika ny vondrona beatbox olombelona ao amin'ny Incredibox mampino